Air Multi- Piston ပုံသွင်းစက်
ဟိုက်ဒရောလစ် Multi- Piston ပုံသွင်းစက်
Static Pressure Molding စက်
အလျားလိုက် Flaskless Molding Line
Static Pressure Molding Line တွင် သွန်းလောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ
static pressure molding line ၏လောင်းခြင်းအား လောင်းခြင်းချို့ယွင်းချက်များ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ လောင်းခြင်းအပူချိန်သည် အလွန်နိမ့်ပါသည်။ 2. အဆက်မပြတ်လောင်းခြင်းသည် သွန်းသောသတ္တုကို မညီမညာဖြစ်စေသည်။ လောင်းခြင်းကို ပြန်လည်စတင်သောအခါတွင် အောက်ဆိုဒ်ဖလင်များ ထွက်လာရန် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူရန် လွယ်ကူသည်...
အလိုအလျောက် moluding စက်၏ထိန်းချုပ်မှုနိယာမ
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်သည် အဓိကအားဖြင့် လေဖိအားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံသည်။ လေဖိအားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် fluid control ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လေဖိအားထိန်းနည်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘောဂဗေဒ ၊ tex တို့တွင် အသုံးပြုသည်။
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်များအတွက် အပူလျှပ်ကာများ
1. ပုံသဏ္ဍာန်စက် ပုံသဏ္ဍာန်မစတင်မီ ဆီအပူချိန်ကို စံပြဘဝအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေရန် နာရီဝက်ခန့် ကြိုတင်အပူပေးပါ။ 2. ပုံသွင်းစက်သည် ဆောင်းရာသီတွင် အပြိုင်လည်ပတ်သည့်စနစ်ရှိ စက်ကိရိယာများ၊ ပန်ကာများနှင့် ပန့်များအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းအပူလဲလှယ်သည့်စည်ကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
1. ပုံသဏ္ဍာန်စက် ပုံသဏ္ဍာန်မစတင်မီ ဆီအပူချိန်ကို စံပြဘဝအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေရန် နာရီဝက်ခန့် ကြိုတင်အပူပေးပါ။ 2. ပုံသွင်းစက်သည် ဆောင်းရာသီတွင် အပြိုင်လည်ပတ်သည့်စနစ်ရှိ စက်ကိရိယာများ၊ ပန်ကာများနှင့် ပန့်များအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ အတွင်းအပူလဲလှယ်ပိုက် (မနည်း...
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်ထုတ်လုပ်သူများသည် မျှော်လင့်မထားသောအချိန်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
1. ပုံသွင်းစက်ထုတ်လုပ်သူ အလုပ်သမားများသည် အလုပ်ဆင်းပြီးနောက် အလုပ်မှထွက်ခွာရန် လိုအပ်ပြီး ရပ်နားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွင်၊ ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ထမ်းများသည် ပုံသွင်းစက်တွင် မတူညီသောပစ္စည်းများ အပိုင်းအစများမရှိစေရန် စစ်ဆေးရမည်။
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်များအတွက် မှန်ကန်သော ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ ရွေးချယ်မှု၏ အရေးကြီးမှုမှာ အဘယ်နည်း။
ခေတ်မီ စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် အရေးကြီးသော အချက်မှာ စက်ကိရိယာများ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ်သည် ၎င်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေအတွက် အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းခြင်းလိုင်းသည် လုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် အလုပ်ရုံအမျိုးမျိုးကို စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စက်ရုံတစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် တပ်ဆင်လိုင်းတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်...
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက် အမျိုးအစားမှားရခြင်း အကြောင်းရင်းကား အဘယ်နည်း။
21-07-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
စနစ်၏ အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက် အမျိုးအစားမှားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍၊ အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါ အရေးကြီးသော ကဏ္ဍနှစ်ရပ် ရှိသည်- တစ်ဖက်တွင်၊ ပုံသွင်းစက်၏ တိကျမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး တစ်ဖက်တွင် ၎င်း၏ ပံ့ပိုးပေးသည့် I art ကိရိယာများကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတွေ ဒါမှမဟုတ်...
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှု နိယာမကား အဘယ်နည်း။
လေဖိအားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် fluid control ၏စည်းကမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လေဖိအားကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် ထိန်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ အထည်အလိပ်၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ သတ္တုဗေဒနည်းပညာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ပုံသွင်းစက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အပူချိန်ကို မည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်မည်နည်း။
21-07-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
1. Air cooler အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု အအေးခံနည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တစ်ခုအား ပုံသွင်းစက်၏ ပင်မစက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သို့ ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ စနစ်အတွင်း လည်ပတ်နေသော အပူချိန်မြင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီများကို အေးစေရန်အတွက် ဆီပြန်ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက်ကို မှန်ကန်စွာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
1. မတူညီသော ပုံသွင်းစက်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ အော်ပရေတာသည် ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ချောဆီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကဲ့သို့သော ကွန်ရက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသင့်သည်။ ကျစ်လစ်စေရန်အတွက် အဓိက အဆင့်လေးဆင့်ရှိပါတယ်...
အလိုအလျောက် ပုံသွင်းစက် သဲထဲ ကပ်မရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
အလိုအလျောက်ပုံသွင်းစက် စေးကပ်သောသဲသည် တရုတ်သွန်းသောသတ္တုစိမ့်ဝင်မှုဟုလည်းသိကြသော စေးကပ်သောသဲသည် အရည်သတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုပေါင်းစပ်အောက်ဆိုဒ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆံချည်မျှင်မျက်နှာပြင်အတွင်း သဲကွက်လပ်အတွင်းသို့ သွေးကြောမျှင်များကို စိမ့်ဝင်မှု သို့မဟုတ် အငွေ့အဆင့် စိမ့်ဝင်မှုဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုဖြင့် တူးဖော်နိုင်သည်။ ...
ဖောက်သည်အတွက် တန်ဖိုးများ ဖန်တီး၍ US သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
B-706၊ Weifang ရုံးချုပ်အခြေစိုက်စခန်း၊ No.2998 Beihai လမ်း၊ Hanting ခရိုင်၊ Weifang မြို့၊ Shandong ပြည်နယ်
Molding Casting Flask, ဓာတ်ဘူးမှိုစက်, Semi-Automatic ပုံသွင်းစက်, ပုံသွင်းစက်, Punch Out စက်, စက်မှုတည်နေရာပြကိရိယာ,